Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahin Ku Saabsan Weerarkii Muqdisho Ka Dhacay.
Faah Faahin Ku Saabsan Weerarkii Muqdisho Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ February 25, 2018
Waxaa lasoo afjarey weerar qorsheysan oo koox ka tirsan al-Shabaab ay soo qaadeen magaalada Muqdisho Sabtidii. Weerarka ayey u adeegsadeen markii hore qaraxyo waaweyn. Qaraxa 1aad ayaa ka dhacay meel gawaadhida la dhigo ee Hotel Dorbin (ex Bar Fiat).
Qaraxa 2aad ayaa ka dhashey gaadhi bom lagu soo xidhay ayaa isku dayey in uu xoog ku jiiro meel gaadiidka lagu istaajiyo oo ku taala isgoyska Sayidka. Gaadhigan oo aan la sheegin noociisa ayaa ku qarxay agagaarka taalada dhagaxtuur, kadib markii ciidamada amaanku u suurta gashey in ay taayirada xabbad kala dhacaan.
Qaraxa hore ee ka dhacay Ex Bar Fiat ayaa la sheegayaa in dad badan oo shacab ah ku geeriyoodeen kuwaas oo maalinimada Jimacada dib uga so noqdey xeebta Liido. Wararku waxay sheegayaan isku dar wadarta guud ee dhimashadu in ay ku dhawdahay 30 qof, Shirkadda Aamin Ambulanse ayaa sheegtey in 21 qof meydadkooda ay ururiyeen.
Qaraxyada kadib ayaa koox la sheegay in ay ahaayeen dhawr nin oo la socdey gaadhiga ka gudbey Isgoyska Sayidka ayaa weerar toos ah ku qaadey ciidanka ilaalada, waxaana ay isku dayeen in ay xarunta Madaxtooyada ka weeraraan dhanka albaabka SYL. Wasiirka Amniga Dowladda Federaalka Maxamed Abuukar Islow ayaa xaqiijiyey in dhamaantood la diley waxaana la soo bandhigey meydadkooda. Kooxda meydkooda la soo bandhigay ayaa xirnaa dharkii u danbeeyey ee ciidamada Boolisku xidhaan.
Waa weerarkii u horeeyey ee muddo dhawr bilood ah kadib ka dhaca magaalada Muqdisho kaas oo fashil ku dhamaadey, waxaana uu ku soo beegmayaa xili Raysalwasaare ku-xigeenka Turkiga iyo wefdi uu hoggaaminaayo ay Muqdisho weli ku sugan yihiin.